အကူအညီလာတောင်းတဲ့ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံတစ်ဦးကို ချက်ချင်း နိုင်သလောက်လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူထွေး - Cele Gabar
အကူအညီလာတောင်းတဲ့ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံတစ်ဦးကို ချက်ချင်း နိုင်သလောက်လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူထွေး
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အောင်မြင်မှုရရှိလာတာနဲ့အမျှ အခြားသူတွေကိုပါလက်တွဲခေါ်ယူဖို့ ဝန်မလေးသူလေးကတော့ ဖြူဖြူထွေးပါ။ ခက်ခဲနေတဲ့ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံအနုပညာရှင်တွေကို သူရထားတဲ့ ကြော်ငြာတွေမှာ ထည့်သုံးပေးပြီး တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ကူညီနေသလို ကြော်ငြာရိုက်ကူးပြီးချိန်မှာလည်း ဂါဝရတရားရှေ့ထားပြီး ကန်တော့လေ့ရှိသူပါ။
မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့ ဖြူဖြူထွေးကတော့ မနေ့ကတော့ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ကို နိုင်သလောက် လှူဒါန်းပေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့အလှူလေးကို ရေးသားမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ” ရိုက်ကူးရေးကပြန်ရောက်ရောက်ချင်း….. လေးလေးကအိမ်ထဲထိဝင်လာတယ်…. လေးလေး ဘာများပြောစရာရှိလို့လဲဆိုတော့? ကဒ်လေးပြပြီးအခက်အခဲ ဖြစ်နေကြောင်းပြောတယ်….. ဖြူဖြူလည်း တတ်နိုင်သလောက် ကန်တော့ခဲ့ပါတယ်” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့အလှူလေးကို မျှဝေခဲ့ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ…
ဖြူဖြူထွေးကတော့ တကယ်ခက်ခဲနေသူတိုင်းကို မညာဘဲနဲ့ ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကို အမှန်အတိုင်းပြောရင် ကူညီဖို့ အသင့်ပါပဲလို့ အင်တာဗျူးတွေမှာ ဖြေကြားလေ့ရှိသူပါ။ မနေ့ကတော့ ရှူတင်ကပြန်ရောက်ရောက်ချင်း ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ အကူအညီလာတောင်းခဲ့တဲ့ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံတစ်ယောက်ကို သူတတ်နိုင်သလောက်ကန်တော့ခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူထွေးရဲ့အလှူလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Previous post လှည်းကူးစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာ ဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံလှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ဘုန်းလျှံ
Next post စစ်တွေဆေးရုံကြီးက ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနဲ့လူနာတွေအတွက် တတ်နိုင်သမျှလှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ရတနာမိုင်